Amanqaku kaMat Chandler kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UMat Chandler
Yeyona Zegegeist imangalisayo yoNyaka
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, 2010 NgoMvulo, Oktobha 3, 2011 UMat Chandler
Kulindelwe kakhulu ukuba ndilindele ukufika konyaka kweGoogle Zeitgeist. Ayisiyiyo le nto ndiyenzayo ukuba ndiyithetha kakhulu, kodwa nangenxa yokuba yinto emnandi yokuphatha unyaka nonyaka ukujonga imeko yokukhangela kunyaka ophelileyo.
NgoMvulo, Agasti 23, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMat Chandler
Ngeenkonzo ezininzi ezilwela ingqalelo yethu, kunye neendawo ezininzi zokuthengisa kwi-Intanethi ukulawula, iminyaka yokusebenzisa isoftware enye ukufezekisa injongo ethile ifile njengoDillinger. Njengabathengisi kulindeleke ukuba bongamele iintengiso kuFacebook, ukukhangela okuhlawulelweyo, i-SEO, iTwitter, iibhlog, iikhomenti, iincoko… uluhlu luyaqhubeka.
NgoLwesibini, Julayi 6, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 UMat Chandler
Umxholo wokugcina umxholo ubeka umaleko wokuhlela ekuhambiseni iindaba kunye nolunye ulwazi. Abahleli abangabantu bakhetha amabali abasebenzisi babo "abadinga" ukuba bazi, njengenye indlela yokubakhukula ngomxholo okhethwe yi-algorithm abasebenzisi babo abanokuthi "bafune" ukwazi.
UGoogle, okhokela umnikezeli wokukhangela kunye namandla ehashe ngasemva kwendlela eyaziwayo yeGoogle Analytics kubahlalutyi Isixhobo, siza kuvumela abasebenzisi ukuba bakuphephe ukulandelwa sisixhobo sabo.
Ukucwangcisa ukuCwangcisa isiCwangciso seMidiya yoLuntu
NgoMvulo, Matshi 8, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMat Chandler
Xa ubeka umxholo kunye nesicwangciso-nkqubo seendaba zosasazo, owona msebenzi ubalulekileyo kukuseka ukuba zeziphi amaqonga kunye neenkonzo eziluncedo kakhulu kwiimfuno zakho.
NgoMvulo, Februwari 22, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 UMat Chandler
Ukuqwalaselwa kweenkcukacha kunye nokuhamba rhoqo konxibelelwano kubalulekile kulo naliphi na ishishini elikhulu okanye elincinci. Ukuhamba gwenxa ngokulula okukhokelela kwimpazamo yokuchwetheza kunokuba nokufikelela okukude.